Ben’ny Tanàna Teo Aloha Sy Ny Vadiny Voarohirohy Tamin’ny Fanjavonan’ireo Mpianatra Tao An-tanànan’i Mexico · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i T6
Voadika ny 09 Novambra 2014 19:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Deutsch, Español
Nosamborin'ny polisy federaly tao an-tanànan'i Mexico, renivohitr'i Meksika i José Luis Abarca, ben'ny tanànan'i Iguala teo aloha sy ny vadiny María de los Ángeles Pineda ny maraimben'ny Talata 4 Novambra 2014.
Anisan'irony antsoina hoe “amperora mpifankatia” irony i Abarca sy Pineda ary mpikambana mavitrika ao amin'ny Antoko Revolisiona Demaokratika (PRD), nilaza tena ho antokon'ny foto-kevitra ankavia. Nopetahan'ny media sosialy anarana #LadyIguala i Pineda noho ny endrika hafahafa sy ny jadom-pitondrana izay nitarika azy sy ny vadiny ho voarohirohy tamin'ny fanjavonan'ireo mpianatra. Manakaiky an'i Ayotzinapa, toeran'ny sekoly misy ireo mpianatra ny tanànan'i Iguala,
Mandritra izany, 39 andro no lasa hatramin'ny nanesorana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fahalalahan'ireo mpianatra ary mbola tsy fantatra izay toerana misy azy ireo. Nanao asa tao amin'ireo fasana tambabe maro hita tao akaikin'i Iguala, ao amin'ny fanjakana Guerrero, atsimo-andrefan'ny firenena ny ekipa Antrôpôlôlojika (Haiolombelona) Ara-tsiantifika Arzantina, izay niara-niasa tamin'ireo manampahefana Meksikana. Hatramin'izao, tohanan'ny governemanta federaly ny filazan'ny tantara fa tsy misy ifandraisana amin'ireo mpianatra nanjavona ireo ambina nofo mangatsiaka hita tao amin'ireo fasana, saingy tsy mba nanazava kosa ny niavian'ireo nofo mangatsiaka am-polony milevina ao ireo ny governemanta.
Amin'ny filalaovan-teny anaran'i Abarca sy ny ohabolana Espaniola “El que mucho Abarca, poco aprieta” (mamafy betsaka izy hijinjana kely») no nanararaotan'i Marilú Herrera hampatsiahivana ny tranga mateti-piseho amin'ny famotsoran'ny fitsarana ireo meloka, anisan'izany i Florence Cassez: